Wasiir Qoorsheel iyo danjire Kay oo ka wada hadlay hormumarinta garoonka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Qoorsheel iyo danjire Kay oo ka wada hadlay hormumarinta garoonka Muqdisho
Mareeg.com: Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya Saciid Jaamac Cali Qoorsheel iyo Wakiilka Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa maanta kulan ay Muqdisho ku yeesheen kaga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa labada dhinac.
Kulanka oo qaatay saacado badan ayaa looga hadlay arrimo ku saabsan xagga duulista, saadaashada hawada, isticmaalka garoomada iyo sharuucdooda, iyadoo ay kulanka goob joog ka ahaayeen xubno ka tirsan xafiiska Saadaasha hawada iyo mas’uuliyiin kale.
Wasiirka Duulista hawada Saciid Jaamac Cali Qoorsheel oo markii uu kulanka soo idlaaday kaddib la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ergeyga gaarka ah Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay ay ka wada hadleen sida lagu horumarin karo garoomada diyaaradaha iyo xoojinta wada shaqeynta labada dhinac.
Wasiir Qoorsheel ayaa hoosta ka xariiqay in uu sidoo kale kala hadlay baraalinta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, si howlaha garoonka uu u hayo shacabka looga dhigi lahaa mid si joogta ah u shaqeeya habeen iyo maalin.
“Waxaan ka wada hadalnay in la balaariyo howlaha garoonka oo lagu xiro nalalka iftiimiya halka ay marayaan diyaaradaha (RunWay) waxaan rajeyneynaa in mustaqbalka dhaw in garoonka uu si toos ugu shaqeyn doono habeen iyo maalinba oo ay xilliyada habeenkii ah ay duulimaadyo ka baxaan garoonka, kuwa kalena ay ka soo degaan” ayuu hadalkiisa ku daray Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya.
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa maalin kasta qaabila duulimaadyo fara badan oo isugu jira kuwa rayidka ah, kuwa milateri iyo kuwa hay’adaha Qaramada Midoobay.
Armed forces seize weapons bound for Al-Shabaab terrorists
Muwaadin Soomaali ah oo loo magacaabay ku xigeenka madaxa hayada UNICEF